Maxkamadda ugu sarraysa Kenya oo Qaadatay go'aan aan horay uga Dhicin Afrika Oo Ah In Doorashadii dalkaas Dib loogu Celiyo - somalilandlivemedia
Maxkamadda ugu sarraysa Kenya oo Qaadatay go’aan aan horay uga Dhicin Afrika Oo Ah In Doorashadii dalkaas Dib loogu Celiyo
1:17 2. September 2017
Maxkamadda ugu sarraysa dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaadday doorashadii madaxweynenimada.
Guddoomiyaha maxkamadda ugu sarraysa David Maraga ayaa sheegay in ay ogaadeen in wax isdabomarinno badan ay dhaceen, wuxuuna amray in 60 maalmood gudahood lagu qabto doorasho xalaal ah.
Go’aankan ayaa ah taariikh cusub oo ay Kenya hoosta ka xariiqday ka dib markii ay noqotay dalkii u horreeyay ee Afrika ku yaalla ee waxba kama jiraan ka soo qaada doorasho madaxweyne.
Afar ka mid ah lixdii garsoore ee dacwadda qaadayay ayaa isku raacay in lagu celiyo doorashada, iyaga oo sheegay in doorashadii 8da Agoosto aysan u dhicin si waafaqsan dastuurka Kenya.
Qodobbadii saldhigga u ahaa go’aanka maxkamadda
ku dhawaad saddex meelood meel foomamka way khaldanaayeen. Qaar waxba laguma qorin, qaar isku far ayaa lagu saxiixay, qaar waxay ka yimaadeen xarrumo doorasho oo aan si rasmi ah u jirin, qaar waxaa ka muuqday natiijooyin ka duwan wadarta, sidoo kalena ka duwan tan ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada, kumannaan ma lahayn tiimbareyaal, saxiixyo iyo calaamadaha khafiifka ah ee warqadaha ka dhex muuqda.
Shan malyan oo cod oo ku filan inay natiijada saamayn ku yeeshaan lama xaqiijin.
Baaritaanka qaabka lagu galo kombiyuutarrada guddiga doorashada, maxkamadda waxay u saartay koox soo ogaatay in tiro isticmaaleyaal ah oo aan loo fasixin ay hannaanka gudaha u galeen, ka hor iyo ka dib doorashada.
In guddoomiyaha guddiga doorashada uu galiyey, kana saaray foomamka 34A.
In hannaanka KIEMS ee $24 Malyan joogay ee loogu tala galay in loo isticmaalo in isla markiiba toos loogu soo diro 34A si ay dhinacyada oo dhan u hubiyaan, uu hallaabay dhammaanba xarrumaha codaynta ee dalka oo dhan, sidaa darteedna tirooyinka loo soo diray Nairobi ay badidood yihiin kuwo aan nidaamkaas loo isticmaalin ee lagu soo diray farriin qoraaleedka telefoonka gacanta.
Arrin naadir ah
Taariikhda dhaw ee dunida, saddex dal oo kale oo ayay maxkamadahoodu waxaba kama jiraan ka soo qaadeen doorasho madaxweyne, kuwaas oo kala ah:
Ukraine sannadkii 2004
Maldives sannadkii 2013
Austria sannadkii 2016
Maxay ka dhaheen dhinacyadii ay doorashadu khusaysay?
Madaxa xisbiga mucaaradka Kenya ee NASA, Raila Odinga shir jaraa’id qabtay go’aanka maxkamadda ka dib ayaa yiri “Xukunkan waa mid noociisu nagu wada cusub yahay, wuxuuna guul weyn u yahay dadka reer Kenya oo dhan, Annagu wax kalsooni ah kuma qabno guddiga doorashooyinka sida uu haatan u dhisan yahay, run ahaantiina intooda badan waxay ahayd inayba xabsiyada ku jiraan. Sidanna kuma daynayno dadkii dambiyadaas waaweyn ka galay dadka reer Kenya”.
Madaxaweynaha Kenya oo khudbad ka jeediyay dadka Kenya ayaa sheegay “in uu ixtiraamayo go’aanka maxkamadda balse uusan ku qanacsanayn,”
Madaxweynaha oo ku khudbad ku jeediyay Af Ingiriis iyo Af Sawaaxili “ayaa dadka reer Kenya ugu baaqay in ay nabadda ku dadaalaan oo qofba qofka ku xiga uu gacanta qabsado,”
Wuxuu intaas ku daray “in dadka dariska ah ay daris sii ahaan doonaan, siyaasigay doonaanba ha taageersnaadaan ee”, wuxuuna aad ugu celceliyay in nabadda lagu dadaalo.
Dhanka kalana Axmed-Naasir Cabdullaahi oo ah qareenkii matalayay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay “in go’anka maxkamaddu uu ahaa mid siyaasadaysan”.
“Liiska Hogaanka Gudidii Shirka Beelaha Habarjeclo & Habar-yoonis Oo La Shaaciyay iyo Kulankoodii U Horeeyay V
Basanbuur Biciide oo Qaadacday Shirweynihii Beelaha Biciide Adaraxmaan ee Dooxada DAGAAR
Xoghayaha War-faafinta Xisbiga WADDANI Oo Ka Haddley Arrimo Xaasaasi Ah Iyo War Uu Ku Farxay Muuse Biixi Oo Uu Ka Dhawaajiyey Video
Musharax Cirro Oo Si Murugo Leh Uga Haddley Geerida Naxdinta Leh Ee Ku Timi Marxuum C/raxmaan Maxamed Maxamamuud Talyanle Iyo Tacsida Uu Diray
Newer PostDadkii laga Mamnuucay inay Mareykanka galaan oo Dib u codsan kara dal-kugalka dalkaas
Older Post Magaalada Laas-canood Iyo Sidii Looga Ciiday Maanta Video